Na ny hanofa Lounge hatorian’ireo mpilalao aza, hoy izy, dia tsy vitan’ny federasionina, raha naneho ny heviny manoloana ny tranga fatorian’ireo Barea manao Chan tao Maputo, Mozambika.
Manoloana ny fahombiazany nandritry ny fiadiana izay ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja baolina kitra na CAN 2019 dia tsy navotsotry ny ekipany FC Martingue intsony ny mpiandry tsatokazon’ny ekipam-pirenena Malagasy, Adrien Melvin. Mbola hijanona ao mandritr’izao taom-pilalaovana izao izany aloha ity Barea ity.
Manamafy ny avy eo anivon’ny antoko politika Teza fa tsy misy antony handraisan’izy ireo anjara amin’izay fifidianana ho avy eo. Mila atao mazava tsara, hoy ny filohan’ny antoko, aloha ny fitsipi-dalao rehetra mba tsy handaniana andro.